ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီက အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်း… – PVTV Myanmar
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီက အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်း…
·9months ago ·42 Comments
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီက အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီက ၂၀၂၀ ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်သူလူထုက ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အပ်နှင်းလိုက်သည့် အာဏာကို ကျင့်သုံးလျက်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ကြေညာချက်အမှတ် (၁၉/၂၀၂၁) ဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်အရ၊ အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ယှဉ်တွဲပါတာဝန်များ အပ်နှင်းလိုက်သည်။
(၁) ဦးဝင်းမြင့် – နိုင်ငံတော်သမ္မတ
(၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်
(၃) ဒူဝါလရှီးလ – နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတ
(၄) မန်းဝင်းခိုင်သန်း – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်
(၅) ဒေါ်ဇင်မာအောင် – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန
(၆) ဦးလွင်ကိုလတ် – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်ထဲရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၇) ဦးရည်မွန် – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
(၈) ဒေါက်တာလျန်မှုန်းဆာခေါင်း – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာန
(၉) ဦးတင်ထွန်းနိုင် – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန
(၁၀) ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့်ဘေး
(၁၁) ဒေါက်တာဆာဆာ – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန
(၁၂) ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန
(၁၃) ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန
(၁၄) ဒေါက်တာတူးခေါင် – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ သဘာဝသယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန
(၁၅) နော်ဆူဇန်နာလှလှစိုး – ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ အမျိုးသမီး၊လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန
Like – 50K Share – 11357
2021-04-16 at 2:00 PM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) အား
Ei Mon Win says:
AsaMyanmar citizen,I highly support the National Unity Government (NUG).
Lynn Myat Thaw says:
” အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးအစိုးရ” သည္သာလ်ွင္
AyeBo Ko says:
၁၀၀%ထောက်ခံ ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ။
Win Myint says:
ပြည့်သူ့အစိုးရ သစ်ကို အပြည့်အဝထောက်ခံပါသည်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။
Myat Myo Thu says:
သံသယ ကင်းစွာဖြင့် လုံးဝ ( လုံးဝ) ယုံကြည်ပါတယ်ရှင့်
Nandar Hlaing says:
ပြည်သူ့အစိုးရ ကျွန်မတို့အစိုးရ အပြည့်ဝ ယုံကြည်ထောက်ခံပါသည်
Phyo Pa Pa Aung says:
2021-04-16 at 2:05 PM
အပြည့်အဝ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ထောက်ခံပါသည်။
သွန်း ဝသာန် ဦး says:
၁၀၀% ထောက်ခံပါကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုပါတယ်. အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
Myat Linlai says:
အပြည့်အဝ ယုံကြည် အားပေးထောက်ခံပါသည်
Su Latt says:
2021-04-16 at 2:07 PM
ခြွင်းချက် မရှိ ထောက်ခံ ကြိုဆိုပါတယ် ။
Khin Than Nu says:
2021-04-16 at 2:08 PM
ကိုယ်ပိုင်ရုပ်သံ ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ ကိုယ်ပိုင်တပ်မ​တော် အားရှိလိုက်တာ
Khin Myo Myo OO says:
(National Unity Government)အား လှိုက်လှဲစွာ
Davidaungc Thang says:
Yes! We warmly welcome National Unity Government(အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ)
YuYu Win says:
2021-04-16 at 2:09 PM
အပြည့်အဝ ကြိုဆို ထောက်ခံပါသည်။
National Unity Government (NUG)အား
Htay Kyaw says:
100%ထောက်ခံ ကြိုဆိုပါသည် အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်
2021-04-16 at 2:10 PM
အမျိုးသားညီညွတ်​ရေးအစိုးရ (NUG ) အား ပြည်သူတစ်​ယောက်အ​နေဖြင့် အပြည့်အဝ ​ထောက်ခံ ကြိုဆိုပါ၏
May Yoon says:
Khine Khine Nyunt says:
NUG အား လှိုက် လှဲ စွာ ထောက် ခံ ကြို ဆို ပါ တယ်
အ ရေး တော် ပုံ အောင် ရ မည် 💪✊
U Zaw Zaw says:
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ National Unity Government (NUG) အား ပြည်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် အပြည့်အဝ ထောက်ခံကြိုဆိုပါသည်။ ❤️
2021-04-16 at 2:12 PM
100% အပြည့်အဝ ကြိုဆို ထောက်ခံပါတယ်
Tony Lwin says:
အရေးတော်ပုံ အောင်ကို အောင်ရမည်။
Htun Htun says:
2021-04-16 at 2:15 PM
Cecilia Wah says:
နားထောင်ရတာ အားမရဘူး။ နားထောင်ရင်းမျက်ရည်ကျမိတယ်။
Chit Nyi says:
အရမ်းမျော်လင့်ထားရတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအဖွဲဝင် အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ် 😍😍😍
Chan M. Soe says:
2021-04-16 at 2:18 PM
၁၀၀% ထောက်ခံ ပါသည်။💪💪💪
Khan Cing says:
အား လုံး ဘုရား သ ခင် ေကာင်း ြကီး ေပး ပါ ေစ
Moe Kyaw Aung says:
2021-04-16 at 2:20 PM
Welcome to our NUG.
Naing Aung Htay says:
2021-04-16 at 2:21 PM
ဝမ်းသာလွန်းလို့ ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး။အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။
Soe Sandar Aung says:
We strongly agree NUG.
We support NUG.🧡
Ye Yint says:
2021-04-16 at 2:22 PM
မနက် ၉နာရီ ကတည်း NUGအဖွဲ့ ကိုစောင့်နေခဲ့တာ။ ကျေးဇူးပါဗျာ။ အခုလိုပင်ပန်းခံပြီး တိုင်းပြည် အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးလို့။ လိုအင်ဆန္ဒတွေ အမြန်ဆုံးပြည့်ဝပြီး အရေးတော်ပုံကို အမြန်ဆုံးအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ
Jasmine Tun says:
2021-04-16 at 2:24 PM
We strongly support NUG. အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ✊✊✊
Aye Min says:
2021-04-16 at 2:25 PM
We support CRPH
Linn Htun says:
2021-04-16 at 2:31 PM
Bobo Soe says:
2021-04-16 at 2:36 PM
Warmly Welcome NUG.
စိတ်ထဲမှာ ပီတိဖြစ်ပြီး အစိုးရသစ်တက်ပြီ ဆိုပြီးခံစားမိ၊ ပြီးမှ တိုက်ရအုံးမှာပါလား တွေးမိ၊ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်💪💪💪
Hninz May May says:
2021-04-16 at 2:37 PM
မနက်ထဲကမျော်နေရတာ ဘာအခက်ခဲများရှိလို့လဲလို့ စိတ်ပူနေတာ အခုမှ စိတ်ချမ်းသာတော့တယ်
ကြိုးစားပေးမှု အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်
ဘာသာတရားကိုမကြည့်ပဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အရမ်းချစ်တတ်သွားပြီဆိုတဲ့ စကားရယ်
အမြစ်က နှုတ်ရတာမို့ အချိန်ယူရတာဆိုတဲ့ စကားလေးရယ် ကို တကယ်ကို အားရကျေနပ်မိပါတယ်
NUG အပြည့်အဝထောက်ခံပါသည် ❤
Daw Hsu Mon Kyaing says:
2021-04-16 at 2:39 PM
ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော အစိုးရအသစ်အမြန်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေ။တနေ တနေ့ ကိုယ့်အိမ်မှာ ကိုနေပြီးလှုံခြုံမှုတွေ မရှိတော့သလို ခံစားရပါတယ်။😢😢😢
Thuya Kyaw says:
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ National Unity Government (NUG) အား အပြည့်အဝ ယုံကြည် ထောက်ခံ ကြိုဆိုပါသည်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။
Zwee Mann says:
2021-04-16 at 3:05 PM
ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္စားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေနာက္လိုက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝ္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စီးလံုး ညီၫြတ္စြာျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ကာကြယ္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလ်ွက္
2021-04-16 at 4:27 PM
ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာထက် ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကလေးတွေ သိရင် ဘယ်လောက်ထိ ပျော်လိုက်ကြမလဲ😢
Monlay Monlay says:
2021-04-16 at 6:30 PM
စောင့်နေရတာ အခုတော့ဆန္ဒတွေပြည့်ခဲ့ရပီး အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ် နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ အတိတ်ကအမှားတွေကို သင်ခန်းစာယူနိုင်ပါစေ
And we stand with you
CRPH က အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတွက် ဒုတိယဝန်ကြီးများခန့်အပ်…
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားညီညွတ်…
ရုပ်သံသတင်းများ၊ ရုပ်သံစာမူများ၊ သီချင်းများနှင့် အခြားဖန်တီးမှုအနုပညာလက်ရာများ၊ Video များကို [email protected]ar.net သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။